Dhimashada dhammaan saddexda gobol ee Siouxland sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 ayaa sii s | KWIT
Somali News 12.02.20
CDC-da ayaa sheegtay in usbuucii la soo dhaafay gobolka Rushmore uu lahaa heerka ugu sarreeya ee dhimashada qofkiiba ee waddanka.
Iowa ayaa soo dhejisay 22 dhimasho dheeraad ah oo ka timid coronavirus, maalintii saddexaad oo isku xigta oo in ka badan 20 dhimasho ah waxayna kordhisay tirada dhimashada gobolka 2,449 iyo ku dhowaad 3,000 kiisas dheeri ah.
Sideetan iyo afar ka mid ah 99ka degmo ee Iowa ayaa leh 14-maalmood oo wax ku ool ah oo ka badan 15%, oo ay ku jiraan dhammaan waqooyi-galbeed Iowa. Gobolka Ida ayaa hadda ugu sarreeya gobolka in ka badan 29%. Heerka Degmada Woodbury waa 18.8% wuxuuna waxyar ka socdaa shalay.
Isbitaalada ayaa ku sii haray isbitaalada Iowa, oo ay ku jiraan 102 ee Mercy One iyo UnityPoint-Health St. Luke’s. Taasi waa isla heerka shalay rikoorkiisu sarreeyay. Xogta gobolka waxay muujineysaa 181 bukaan oo la dhigay gobolka oo dhan 24-kii saac ee la soo dhaafay, taas oo ka korodhay maalmihii dhowaa.
Nebraska waxay heli kartaa shixnaddeedii ugu horreysay ee tallaalka coronavirus in ka yar laba toddobaad haddii mid ka mid ah daawooyinka la soo jeediyay uu ku guuleysto ansixinta federaalka.
Badhasaabka Pete Ricketts ayaa sheegay in shaqaalaha daryeelka caafimaad la siin doono ahmiyada koowaad isla markaana laga yaabo in guud ahaan dadwaynuhu aysan helin ilaa iyo bisha Abriil.
Saraakiisha gobolka ayaa qorsheynaya inay helaan in ka badan 100,000 dhamaadka bisha.